Indonesia in Focus: Cadho Ilaah ka gees ah dadka History, sidoo kale dhacda in aadanuhu maanta.
Cadho Ilaah ka gees ah dadka History, sidoo kale dhacda in aadanuhu maanta.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (349)
(Qaybta saddex boqol afartan iyo sagaal), Depok, West Java, Indonnesia, August 18, 2015, 13:38 pm).
Cadhada Ilaah ugu ummadu hore sida la sheegay in Al-Quran, sida cadaab wixii ku dhacay Qoomkii Nabi Nuux, Shucayb Nebi, Sodom magaalooyinka, dadka Luudh, iyo Fircoon, sida waano aadanaha marka horjeeda Ilaah ma doonayo inuu rumaysan, la wadaajiyo Eebe shariig (cibaadada Eebe ka sokow), samaynta fasaadka dhulka, oo sida walaalahood dilo walaalahooda Muslimiinta, ama fasaadisaan dhulka, markaas cadaab ah qaab dhulgariir, tsunami iyo masiibooyinka kale ee dhici doonaa dadka maanta, muddada ummadu ka dib markii Nabiga la soo diray sida uu Rasuulkii Ilaah.
Dhawaaqay, qarsoodi Aayaadka Eebe on 25-4-2015 Nepal Dhulgariirka
lokasi_gempa_dan_candi_25_4_2015Sebuah dhulgariir ba'an dhacdaa, sabtida 25-4-2015 taariikhda, Dhulgariirka Nepal, 1000 Yurub iyo 6.621 oo meeley u sheegay oo maqan lagu dilay Nepal, badbaadey macquulka yar iyada oo kor u niyad ah, Nepal Dhulgariir Tirada dhimashada oo gaaray 7365
Tirada dhimashada ayaa ka dhacay dhul-gariirkii ruxay Nepal on April 25 ayaa kor u kacay in 7365 oo qof iyo tiro ka mid ah dhaawacyada duubay 14 366 oo qof, halka maamulka gobolka bilaabeen nidaamka dib u dhiska si ay u diyaariyaan.
Faafidda Wararka la isla dhexmarayo sida wax dabiici ah, Hambalyo Story 'guriga kuusha Goddess' on Dhulgariir Nepalsimbol_99_pada_gempa_nepal_25_4_2015
Liputan6.com, Kathmandu - Marka gariir wax burburiya dhuftay Nepal todobaadkii hore, ma dageen kaliya guryahooda. Dhismayaal taariikhi ah sida macbudyo iyo Sidaana ee ugu weyn Darbar Square ee Kathmandu burburay. Laakiin strangely, guriga jir 9 sano ah oo loo qadarin sida ilaahadda ayaa weli taagan. "Waxa uu inoo ilaaliya," ayuu yiri Durga Shakya, guri ilaalin ama kuwo caaya Kumari Samita Bajracharya, kaas oo sida Addomahaaga ka timaadaa beesha Newar wadaniga ah ee dooxada Kathmandu ah, u sheegay VOA News, ayaa Axaddii (05/03/2015). "Bal eeg hareeraha, guriga Kumari sii qumman yahay. Kaliya crack yar hal dhinac, laakiin aan ahayn wax uu. Xitaa waxa ku jira, alaabta jirin dhacay, wax walba waa uu fiican yahay, "ayuu yiri Durga.
Ogow xogta ah in qof kasta u akhrisan kartaa, xusuusana dhulgariir dhibaatada badan waxay dhacdaa 25-4-2015 taariikhda mengapat sax ah? sababta aan taariikhaha kale? ... Ilaa dhicidda dhulgariir xaqiiqada Nepal, Heerka Ground kac One Meter
Yaa ugu wayni waxay tahay ilaahadda Kumari this? sida ay wikipedia, Kumari (carruurta) kumari_nepal
Kumari, ama Kumari Devi, ama Goddess Nool - Nepal waa dhaqan ka mid ah gabdhaha u Sujuudi pre-pubescent yar yar sida daliilka tamarta dumar rabbaani ah ama Devi ku dhaqanka diinta Hindu. Kumari sheegay, waxay ka timaadaa Sanskrit taas oo macnaheedu yahay Kaumarya "bikrad", waxay ka dhigan tahay haweenka aan la qabin dhallinyarada ah ee Nepal iyo luuqado Indian qaar ka mid ah oo waa magaca ilaahadda Durga sida ilmaha ...... Codsadaha a booqo Kumari qolka halkaas oo uu ku fadhiistay carshigii libaax oo dahab ah. Qaar badan oo ka mid ah kuwa soo booqan waa kuwa qaba dhibaatooyin dhiigga ama caadada tan iyo Kumari ayaa la rumeysan yahay in ay leeyihiin awoodo gaar ah in ka badan cudurka. Waxa uu sidoo kale booqday by shaqaalaha iyo madaxda kale ee dawladda. Codsadaha ku baahday hadiyado iyo qurbaannada keeno ee Kumari, oo iyaga soo dhoweeyey aamusnaan. Marka, ayuu iyaga ugu bixiyey inay taabtaan ama cagihiisa dhunkado sida ficil u kaliyeeli. Inta lagu guda jiro dhagaystayaashan, Kumari waxaa si hoose dabagal iyo Falimahana fasiraa sida saadaasha nololeed 'codsadaha, tusaale ahaan sida soo socota:
Oohinta ama qosol qaylo ah, cudur halis ah ama dhimasho
Qayli ama u salaax indhahaaga: dhimasho degdeg ah
Sacabka Gacanta: Sababta cabsan King
Doorashada qurbaannada: dhaqaale
Haddii Kumari iska aamuseen oo dadban oo dhan dhagaystayaasha, dadka ay ka baxaan faraxsan. Tani waa calaamad u tahay in ay dooni la siiyo.
Dhacdadan ayaa sidoo kale ku dhaqanka ee Indonesia ee scale kale, kuwaas oo dhagaxa sixir Ponari kumanyaal visitors ee 2009 tahubn ka hor
Ponari-iyo-dhagax-ajaibnya_sctvpengunung ponariPonariEntah sida kadis ah ama aan, ka dibna PONARI waxayaallaha P = 16, iwm sidaasuu u bixiyay lacag dhan 73, ka dibna Kumari sidoo kale K = 11 iyo wixii la mid ah ayaa sidoo kale laga tiriyey oo 73situ_gintung_27_maret_2009_dan_kak_seto_ponari_kehadiranNya
Ka dib markii la caabudo oo xad-dhaaf ah, adi- dhagaxa sixir galay biyaha iyo biyaha la cabbo, si lama filaan ah Taariikhda 27-3-2009, gintung halkaas lagu kala furfuro overwrite caasimada, oo aan ku saabsan Ponari. Waxa uu leeyahay in warningkan inta aanay musiibadu dhicin marka hawlaha kisi ah ku qaadeen, ogeysiiska digniin hoos iniponari_dan_batu_ajaibnya
Fiiro gaar ah Ponari i-up-qaran tirooyinka booqanaya Ponari
ponari_kak_setoDan guriga Kak Seto ayaa ay masiibadu saamaysay daadkii waxaa gintung, oo ka dib markii dhulgariir weyn ka dhacay sida calaamad u ah ingatgempa_cina_12_5_2008_tsunami_jakarta_27_3_2009_gempa_padang_30_9_2009Bagaimana si sahlan loo gariirka Nepal la Indonesia in taako ka mid ah 99? la soco sawirka kor ku xusan, marka gintung waxaa ka dhacay 27-March-2009, ee 99 + 88 maalmood ka dhacay Padang Dhulgariir 30-9-2009, ...... Ka dib markii Nepal, dhulgariir aad u weyn 'hoos' Padang?
Galabta Sunny jiilaalka, Isniin, January 15, 1934 Inta badan Kathmandu ee ka jira beeraha ama waa on Terrace on saqafka sare ee gurigooda, raaxaystaan aragtida samada buluug iyo neecaw qabow xagga galbeed.
Si kedis ah, dhaceen wax la yaab. Dadka kor u eegay, oo la yaabay in la arko boqolaal - xataa kumanyaal - Shimbiraha duulaya jiho oo dhan isku mar. Dogs Barking dhiso sirgaxan, xayawaanka aan xasilooneyn. Qiyaastii 14:28 waqtiga degaanka, dhulku ruxmay, dhulka u muuqday inuu u dhaqaaqo, dhireedku sida hirarka badda ee badda.
Daqiiqado ka dib, oo dhan oo aan weli waa u baabba '. Guryaha ayaa la duminayaa, macbudyo burburay, dildilaaca dheer tageynaa jidadka. Daruuraha qarada waaweyn oo boodh baxna samada. Kaliya arrin of daqiiqo, 17,000 qof ayaa ku dhintay Nepal iyo waqooyiga Bihar, India. Inta badan dhibbanayaashu waxay yihiin kuwa Valley Kathmandu ah ... .. dhulgariir lahayn ee 1255, saddex meelood meel ka mid ah dadka ku dhintay dooxada Katmandu. "King of Nepal, Abhaya Mallajuga dilay dhulgariir la mid ah," ayuu yiri Laurent Bollinger, seismotectonician Commissariat on Atomic Energy ee France, sida laga soo xigtay website sayniska Livescience by. ... Waxaan saadaalin karaa dhulgariirrada? Jawaabtu waa maya, "ayuu yiri Peggy Hellweg, oo ah maamulaha howlaha Seismology Laboratory University of California, Berkeley ... .. Iyada oo booqday gobolka Bihar, mid ka mid ah meelaha dhulgariirkii ugu xumaa ee 1934, Mahatma Gandhi ayaa sheegay in Dhul-gariirku ahaa aayahooda" aargoosi "Leegada Maxaa ka mid ah Hindiya tirtirtay nidaamka kala qoqobaya ah ... ..
Si kastaba ha ahaatee, ma Gandhi mana saynisyahano 1930, ma aan ogayn, roobka in u buuxiyo webiyada waaweyn ee Himalayas iyo qulqula badda Bengal waa qayb muhiim ah ka ah hannaanka.
Dr. Pierre Bettinelli ahaa saynisyahan ugu horreeyey, oo sanadkii 2007, waxay muujinaysaa roob badanna ka waaweyn - ugu weyn ka dib markii berkeddii weysada Amazon ee - uu saameeyey dhulgariirkii ka dhacay Himalayas.
Laga soo bilaabo cidlada ah Algeria, halkaasoo uu shidaalka qodista cilmi - mid ka mid ah sababaha dhulgariir keentay hawlaha aadanaha - Saynisyahan ka hadlay on Newsweek. "Bal qiyaas xoogaa yar oo qoryo biyaha ku dul - waa waslad khafiif ah oo Indian - Injaklah cagaha kula. Sidaas darteed, la abuuro cadaadis, faragelinta biyo ku xeeran. Kaasi waxa uu ahaa horumar ah ee dhacdooyinka seismic oo ku taalla daafaha gardarrada. "Mount Everest soohdinta reer Nepal waxaa natiijada bannaystaan aan dhamaadka lahayn ee u dhexeeya Eurasian iyo Indian, arrin dabiici ah oo keeni kara in musiibada. "Saamaynta dhigaysa Nepal imaanshiyaha dhakhso ah dhulgariirka," ayuu yiri Professor Roland Burgmann of the Department of Earth iyo dhulkooda Science, University of California, Berkeley. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro mid ka mid ogaado karo, qeybta burburtay arrin maalmood, bilood, sano, ama labaatan sano ....
Hanjabaada dhulgariir 8.9 magnitude in Padang
Habeen Deggan galay rabshad jeestay, Sunday, November 25, 1833 at 22:00 pm agagaarka. Waqtigaas, dhulgariir iyo xooggaaga oo ka mid ah 8.8 in 9.2 on Richter, xarunta ku yaalla xeebaha galbeed ee Andalas. Sababta waa dillaac ah Sumatra gabal berkeddii socdaan 1,000 km. Dhulgariir xoog leh dareemay in Padang, West Sumatra. Markii hore, gariir waxaa loo arkaa mid caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, naxdintii xoog raacay ....
dadka argagax dareemay dhulkuna wuu gariirayaa Lugahooda hoostoodaba ah. "Ciinwaanka by dayaxa, waxba si ay u arkaan dhismayaasha iyo geedo ruxmay, inay Cadha daraadeed biyaha u dhaxeeya dildilaaca u muuqday in dhulka xoog weyn, wax qarqinaya Wabiyaal, badaha-rogaan."
Dr. A.F.W. Stumpff xusay, in August, September iyo October ayaa lagu arkay in ay dhacaan dhinacada kulaylka iyo huurka. "Iyada oo maalintii dhulgariir ku dhuftay (isagu wuxuu ku qoray 24-ka November) waxa lagu gartaa aamusnaan qoto dheer caalamka oo dhan. Dad badan ma oga. "Dhacdadan ayaa dhacday kaliya seddex daqiiqo, laakiin saamaynta ahaa weyn. Dhulgariir ayaa kiciyay tsunami ah oo ka dhacay xeebta galbeed ee Sumatra, iyadoo meesha ugu dhow xuddunta u ahaa Pariaman Bengkulu.
"Haddii aad codsato, halkaas oo waa dhulgariir soo socda waa weyn ku dhici doonaa, caddaynta ugu awooda badan u keenaysaa in Sumatra la olloga ah," ayuu yiri.
Dhulgariirka ka iman Padang ma la xiriira dhulgariirkii ka dhacay Nepal?
Si gooni gooni ah Wareystey, seismologists ka Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Dr Danny Hilman yiri, ma. "Waxaa la gobol ku xiran, waxaa jira goobo ka mid ah iskoor tamarta. Laakiin waa fog. Kala ilaa kun oo kiilomitir. Inkastoo dhaqdhaqaaqa (saxan) ayaa shalay oo kaliya dhowr mitir. Sidaas ma aha run ahaantii dhacay dhulgariir weyn (ku sugan Nepal) keeni kara dhulgariir ee Indonesia, "ayuu yiri isagoo wareysi siinayay Liputan6.com.
"Haddii waxaa jiray dhulgariir ah Padang, waa sababtoo ah waa wareegga," ayuu hadalkiisa raaciyay. Danny ku daray, in megathrust Mentawai dhulgariir saadaasha - taas oo lagu qiyaasay in ay gaaraan 8.8 in 8.9 magnitude xoog - ma dhici. "Been Megathrust xeebta galbeed ee Sumatra, wuxuu bilaabay Andaman, Aceh, Nias, ilaa Strait of Sunda, Java, Bali, Lombok," ayuu yiri Danny. "In Sumatra, Aceh ayaa kala (aka dhulgariir demin ilaa tamarta), Nias hore u off, Bengkulu hore u off. Mentawai soo baxay ma, "ayuu yiri.
7.6 magnitude dhulgariir in ruxay West Sumatra oo lagu dilay 1,117 oo qof on September 30, 2009, ayaa sheegay in Danny, dhaca qaybaha kale. Ma Mentawai. "Heerka tamarta ee Mentawai ay horey u buuxa, mar hore ee Dhammaadka wareegga ah. Fikrad ahaan dhici kara maanta ama berri ... "
Fiiro gaar ah Dhulgariir Nepal, ee 99 + 88 maalmood ah ka hor waa maalin muhiim ah oo taariikhi ah oo Indonesia
Nepal dhulgariir 25-4-2015 Loading Message 99 Sidoo kale
Fiiro gaar ah dhulgariir Nepal this, ka dibna wuxuu noqday muran, gabar guriga sida calaamad oo ah Hindu Goddess Durga Joog toolmoonu Marka Dhulgariir Nepal Fiiro calaamad si sahlan loo xusuusan 99 ee hoos ku
fakta_gempa_nepal_25_4_2015Secara xaqiiqooyin la taaban karo oo calaamad 99 waa xaqiiqo dhab ah oo caalami ah in markii dhulgariir ka dhaca synchronously 11/22/2014 ee Japan iyo Shiinaha, si ay billawdaan 99 + 55 dhulgariir ka dhacay Nepal
xaqiiqada gempa_nepal_25_4_2015_154_hari_gempa_jepang_cina_22_11_2014Sebuah markii Nepal, halkaas oo ay N = 14, E = 5 FF = 48, markaa 99 dib-u-muuqday astaan
Dhab ahaantii A qalaad oo Marti Marabahaya
A run calaamado mataano ah oo ku ballaadhisay iyada oo Hercules Fall diyaaradaha, diiwaan Jokowi 20-10-2014 dhaartay in uu noqdo madaxweynaha, markaas 99 + 99 + 55 maalmood waa 30-6-2015, Hercules Diyaaradaha dhimashada dhacay badan,
Xusuusnow muddada mugdiga markii Herkules ku dhacay 30-June-2015 oo ku jira taako mataano ah, ilaa dhulgariir xun ee ka dhacay dalka Nepal 25-April-2015
Range 33 maalin ka dib markii caleemasaarka 20-10-2014 Japan iyo Shiinaha Dhulgariir ka dhacay Date mataanaha ah 22-11-2014
Maxay noqon doonaan labo ka mid ah waxyaalaha qarsoon ugu weyn ee dhulgariir waxay u dhaceen, sida qeyb ka mid ah xusuusta dhacdada ah ee Indonesia, kaas oo ayaa isla markaa dhacay, ogow sawirrada soo socda ee kala duwan oo mataano ah, akhri maqan yaab leh oo ah Laba dhulgariir Japan iyo Shiinaha
Dhulgariir gilgilay ciidanka Nepal 25-April-2015, 187 (99 + 88) maalmood ka dib markii Jokowi talabadaasi
Dhulgariir A rentetang taariikh mugdi ah ka dhacay Nepal 25-April-2015 sida taako mataanaha ah ee Madaxweynaha Jokowi,
akhri si layaab, 25-4-2015 Nepal Dhulgariir diiwaan Al-Quran
Diyaarad Herkules dhaca 30-Jun-2015, Range 253 (99 + 99 + 55) maalmood ka dib markii Jokowi talabadaasi
Dhacdooyinka madow ee Herkules ku dhacday 30-June-2015 (eeg Magic, Hercules Diyaaradaha dhaca 30 June 2015 ee Medaan qoray On Al-Quraanka)
dayrta pesawat_herkules_jatuh_30_juni_2015Rentetan dhacdooyinka Herkules diiwaan image hoose
Diyaarad-by-diyaarad Fall / dhibaato sida hoos ku sheegaysa muujisay in Herkules Fall diyaaradda 30-Jun-2015, Range 253 (99 + 99 + 55) maalmood ka dib markii Jokowi caleemo 20-10-2014
F-16, F-16 aawadood oo ah ku dhacaan ama dhexdeeda Godoo kale calaamad F-16 waa F = 5, ilaa 5 + 1 + 6 = 22, kaliya in waqti caleema saarka ee Jokowi, Fall Fall maqan qariibsado Diyaaradaha F-16 Gubashada & dhaca dhismaha dabaq Indonesia Satgultor Xaflada caleema saarka Jokowi ... sheekooyin kale Fall A ka Indonesia Satgultor xubnaha ka ah dhismaha dabaq ee Jokowisimbol_kembar_aneh_tanda_dari_langit xaflada caleemasaarka
Ponari oo debadda oo cidhiidhi la yaab leh oo Umad, ee Indonesia ayaa sidoo kale wax la yaab leh ku dhacay, ka sokow markii sanadkii 2006 dhulgariir yogya 27-May-2006.
Waqtigaas qof weyn waa sheekada horyaalka marijan loo yaqaan oo Tinta labuhan, akhri Genesis Odd-Odd Ka hor inta Mbah Marijan dhinteen
Sleman - haya Mount Merapi, RP Suraksohargo si fiican u yaqaan Mbah Marijan keentay alit dekedda socod ee Gate Srimanganti ama POS 2 Merapi. Xaflad Alit dekedda oo sannad walba ku dhacaa 30 Rejeb Jafaaniis taariikheed ee 1939 la sameeyey oo lagu xusayey madaxtooyada jumenengan ama carshiga reer Sri Sultan HB X sida boqor Kraton Ngayogyakarto Saldanada. Merapi Labuhan xaflad dhaqameed Sabtidii (26/08/2006) ee Hamlet ee Kinahrejo, tuulada Cangkringan Sleman Umbulharjo kaas oo sidoo kale waa degenaanshaha ee meel gaar Merapi, Mbah Marijan. Socod ayaa la qabtay maalin ka dib xaflad dekedda Parangkusumo ee Bantul. Ka hor inta socod ah, ayaa Jimcihii lagu sameeyey Munaasabada wareejinta dekedda ubarampe ah ergeyga reer boqor ahaa saraakiisha Cangkringan Sleman. Laga soo bilaabo degmada, alaabtana dilabuh doonaa gelinka dambe waxaa loo dhiibi doonaa in la meel gaar ah Merapi, in la aasay. New saaka, socod uu ku bilaabaa keentay dekedda Mbah Marijan oo ay la socdaan dhowr ugu horeyn wadamada kale ee reer boqor. Boqolaal qof ayaa ka qayb galay buuxiyey oo guriga Mbah Marijan in ay ka markhaati this socod sanadlaha ah.
mbah_marijan_tv_one_2Sebelum socod socod uu ku bilaabmaa, muwaadiniinta doonaya ngalap ammaanaya fuulid hore ee jira iyada oo loo marayo qaybta koonfureed ee jiirta. Dawn ayaa degan dad badan oo isugu soo taambuuggiisa dekedda Srimanganti bilaabmaa meel socod ee Post 2 ee gobolka taas oo Kendhit Merapi Xagiisaana Geeduhu ka xadka kaynta. Subaxdii ilaa ay dhacdo dhacay samada cad leh heerkulka 20 darajo Celsius. Ka hor xafladda lagu qabtay dekedda tan iyo galabta ilaa subaxdii Saturday, Merapi ahaa cad, in kasta oo dhawr maalmood ka hor buurta ayaa waxaa had iyo jeer daboolay ceeryaamo. Qaar ka mid ah waxyaabaha dilabuh badan sida siddeed nooc oo ka mid ah daboolida, dhar Sinjang cangkring, Jasmine gadhung semekan, bango semekan diiday, yudharaga peningset, safaleeti cindhe, korkiina iwada poleng maro, cadarka, foox boqol, kepeng iyo dhowr qurbaanno ay ka mid yihiin bariis ingkung buuxda danlain kale.
All dekedda ubarampe u qaadeen ugu horeyn. Mbah isu Marijan toos socod sida pacesetter ah. Raacsan inta lagu jiro socod uu ku socday ilaa dhinaca garoonka at POS 2 qaar ka mid ah xubnaha kooxda Samatabbixinta DIY iyo iskaa wax kale. Ka dib markii socda tug ilaa 2 saacadood, kooxda yimid meeshii xafladda. Boqolaal dad ah oo hore u yimid iyo kuwa isugu yimid kooxda Mbah Marijan agagaarka socod ah fadhiistay. Ka dib markii wilangan ama hubinta mid mid waxyaabaha ay u noqon dilabuh. Marka sheegay dhamaystiran oo dhan dekedda ubarampe dambe ee bannaan ee loogu talagalay. Dhinacyada la foox u shideen by oy ammaanka. Joogsaday by tukanayeen alaabta dilabuh muwaadiniinta ka dibna la isku haysto oo doonaya ngalap berkah.murid_mbah_marijan_bawa_keris_benderaUbarampe in dilabuh sida nooc ka mid ah codsiga si aad u hesho daryeelka iyo ammaanka, gaar ahaan in ay Sultan, gobolka Indonesia, Yogyakarta Kraton Yogyakarta iyo shacabka waxaa la siiyay gabi ahaanba meel ka baxsan ammaanka ee musiibada kala duwan gaar ahaan Tani sano ka dib markii qarax ee Merapi ama masiibooyin kala duwan iyo masiibooyin kale. Dekedda ayaa sidoo kale baad ah taliyaha Mount Merapi, taasoo keentay Ayeeyo Kyai xaaq Jagad, Professor Rama, professor Ramadi, Krincing Wesi, Branjang Siligga, Sapu Angin, Mbah Lembang Sari, Nyai Gadhung Mlati iyo Kyai Megantoro kuwaas oo sida taliyihii Mount Merapi. (Jon)
Waqtigaas (2006) mbah marijan ka baxsadeen Merapi taariikhda saxda ah 14-June-2006, ilaa astaanta 99 duullaankii ugu Merapi this on
taako merapi_meletus_14_juni_2006_dan_tanda_kiamat_55Perhatikan ee u gaar ah oo si sahlan loo xusuusan soo socda, ka mid ah Awan Hot Merapi 14-June-2006, markaas 33 maalinta ku xigta dhacaya Dhulgariir & Tsunami pangandaran 17/7 / 2006.awan_panas_merapi_14_6_2006_33_hari_tsunami_pangandaran_17_7_2006Labuhan waxa kale oo baad ah taliyaha Mount Merapi, taasoo keentay Ayeeyo Kyai xaaq Jagad, Professor Rama, professor Ramadi, Krincing Wesi, Branjang Siligga, Sapu Angin, Mbah Lembang Sari, Nyai Gadhung Mlati iyo Kyai Megantoro kuwaas oo sida taliye Mount Merapi.
A 33 in lagu qaado farriimo in 66 si ay u sameeyaan 99, waa kan 66 this?
14/06/2006 markii marijan_dan_kode_66Rentang, soo socota, mbah marijan ma noolaan markii daruurta kulaylka hirarkii Merapi labaad 26-October-2010, sida 1595 maalmood ee isabdal ah 99 × 16 + 11 maalmood, oo si lama filaan ah taako ka mid ah 99 ee laba dhacdo iniawan_panas_merapi_14_6_2006_dan_26_10_2010Sesungguhnya Waxaan dan buu idinka leeyahay ka badan kuwa ku jees jeesa, kuwa ka fiirsan jiritaanka ilaahyo kale Eebe ka soo hadhay, ka dibna way garan doonaan (Suuradda 15: 95-96)
Astaanta A 99 taas oo u muuqata in laba dhacdooyinka hirarkii daruuro kulaylka Merapi
Haddii Gariirkii 25-4-2015 Nepal ma qaadan aad u guulaystay si loo fahmo astaanta 99 (sida Ponari iyo marijan mbah), ka dibna maalin maalmaha ka mid waxa dhici doona mar kale in ay ogaadaan muhiimadda ah 99 ie, Waa wax la qariibsado, ma Ilaah Calaamadaha muuqdaan dhulgariirka 25-4-2015 weerarada Nepal?
"Waa Alle, ma jiro ilaah / ilaah (istaahila cibaadada) wuxuuse, waxa uu leeyahay Sifo asmaa'ul (kuwaasoo magacyadoodii wanaagga)." - (Surah Ta-Haa: 8) Waxaad dhahdaa "Wac Eebe korkiisa ama yeedho Ar Rahman. By hadba magaca waxaad baryeysaan, waxa uu leeyahay al asmaa'ul Husna (magacyada ugu fiican) oo ha adkaynina codkiinnii iyo wixii aad salatmu oo ha sidoo kale waxa ay hoos u helo oo meel dhexe oo u dhexeeya "- (Surah Al-Israa ': 110) "Alle ayaa Asmaa 'ulHusna, ka dibna isaga memohonlah by wanaagsan ugu magac in ..." - (Quraanka, ee Asmaa'ul xusnaa: 180)
Dhulgariir cabirkiisu aan la garanayn ayaa ku dhuftay 200 miles waqooyi ka Iran, ay si toos ah xuddunta hoos magaalada Demghan, oo wakhtigaas noqday caasimada dalka Ayatollah Khomaeni.
Rabshadihii ka dhacay on December 22, 1856 in burburiyey inta badan gobollada Demghan magaalada iyo deriska. Qiyaastii 200,000 oo qof ayaa ku dhintay musiibada.
Intaa waxaa dheer, weli ku jira xaalad la mid ah, haddii ay dhacdo la mid ah ayaa sidoo kale ka dhacay Ardabil, on March 23, 1893. The magnitude dhulgariir aan la aqoon ayaa lagu dilay 150,000 oo qof.
Dhulgariir 7.9 magnitude tirtirto ka Kanto, Japan on September 1, 1923. dhacdo keenay burburinta xad-dhaaf ah oo ku yaala Tokyo-Yokohama. 142 800 qof ayaa ku dhintay dhul gariirkaasi.
Inkasta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Great Tokyo ee Dhulgariirka (ama Great Tokyo Naarta), dhaawac ugu daran ayaa ka dhacay magaalada Yokohama.
Mugga 7.3 meeley u keenay khasaare ba'an ee ka Ashgabat (Ashkhabad) iyo tuulooyinka ku dhow. Ku dhawaad dhammaan dhismayaasha dumay, qaab-dhismeedka la taaban karo si xun u dhaawacay, iyo tareenada xamuulka majara habaabiyey.
Kumanaan qof ayaa lagu dilay ku October 5, 1948 dhacdada. Burburka iyo khasaaraha ayaa sidoo kale ka dhacay degaanka Darreh Gaz ee deriska la ah Iran.
War ka soo baxay dawladda cusub ee madax banaan on December 9, 1988 sheegayaa in tirada dhimashada ay gaareen 110,000. (Ali)
9.1 magnitude oo meeley u ruxay Aceh, Indonesia, on December 26, 2014. Tani waxay Lindu waa masiibo saddexaad ee ugu weyn dunida oo dhan tan iyo 1900 oo ay ugu weyn tan iyo 1964. Guud ahaan 227 898 qof ayaa ku dhintay waayay dhacdada ama.
Intaa waxaa dheer, oo ku saabsan 1.7 milyan oo qof oo ku barakacay uu dhulgariirku. Dhulgariir ayaa sidoo kale sababay tsunami ah ee 14 dal ee South Asia iyo Bariga Afrika.
Dhulgariir ayaa ka dhacay Haiti gaaray 7 SR. Dhacdo ka dhacay on January 12, 2010 oo ay ku dhinteen 222 570 oo qof.
Sida ay sheegayaan qiyaasaha rasmiga ah, 300,000 oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen, qaxootiga 1.3 million noqday, oo 97 294 guryo la burburiyey iyo 188 383 oo burburay degaanka ee Port-au-Prince iyo koonfurta badan Haiti.
Ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay ka dib markii tsunami ah ee degaanka ka jira aagga Petit Paradis dhow Leogane. Hirarku Tsunami ayaa sidoo kale sheegay in Jacmel, Les Cayes, Petit Goave, Leogane, Luly iyo Anse Galets ah.
8 dhulgariir cabirkiisu ka dhacay gobolka Shaanxi (oo horay Shensi), China, oo ku saabsan 50 miles bari-waqooyi bari ee Xi'an, caasimadda Shaanxi, ee 1556. In ka badan 830,000 qof ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen.
Saamaynta Geological dhulgariirka lagu soo waramayaa in la sameeyo carrada wuu dildillaacay. Inta badan magaalooyinka deegaanka in dhaawac daran. Derbigii magaalada burburay, ugu guryihii burburay iyo magaalooyin badan oo dalkii wuu dildillaacay by saarista biyaha burqanayo ah.
Intaa waxaa dheer, dhulgariir 7.5 magnitude ka dhacay Tangshan, Shiinaha on July 27, 1976 Tirada dhimashada ee dhacdada waxaa lagu qiyaasay 655,000 qof.
Dhaawac daran ka dhacay Beijing oo dhan. Tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii ka noqday ugu weyn ee afarta qarniyo soo dhaafay iyo labaad ee ugu weyn taariikhda.
Dhulgariir kale oo ba'an ayaa sidoo kale Aleppo, Suuriya on August 9, 1138. Qiyaastii 230,000 oo qof ayaa lagu dilay dhacdada.
Sababtay uu dhulgariirku, Suuriya ee darbiyada magaalada labaad ee ugu weyn waxaa lagu halligay iyo dhagaxyada kala firdheen waddooyinka. Shuushan oo Aleppo dumay, oo dilay boqolaal qof.
Inkastoo Aleppo waa beelaha ugu badan u saameeyeen dhulgariirka, waxay u badan tahay in aadan ku xanuunsan ugu xumaa ee dhaawaca.
Dhul gariirka ayaa sidoo kale dareemay in Dimishaq, oo ku saabsan 220 mayl koonfur. Dhulgariir Aleppo waa dhacdo ka mid ah dhacdooyinka ugu horeysay dhowr u dhaxaysay sannadihii 1138 iyo 1139 kaas oo burburiyey deegaanka ahaa Suuriya ee reer waqooyiga iyo galbeedka Turkiga.
Dhul Gariir iyo Tsunami Most dhacay oo dhan Taariikhda
Tsunami waa taxane ah oo hirarku biyo oo ay sababeen barakaca ah ee biyaha u tiro badan. Waxaa sida caadiga ah dhacdaa in badda, oo keena dhulgariir, qarax buureedyada, iyo qaraxyo kale oo quuska, dhul, dhibaatooyin quuska oo xataa laga yaabo abuuraan sunaami.
Tsunami ma aha oo kaliya awood leh, laakiin sidoo kale aad u degdeg ah. Iyada oo xawaare sida diyaarad jet ah, tsunami awood u burburinaya wax walba oo la jiifsaday isaga ka soo hor. Halkan waxaa ku qoran 10 ka mid ah dhulgariirka ugu daran iyo tsunami taarikhda aadanaha ayaa sheegay in ay listabuzz.com ah
10. 1964 Alaska Dhulgariirka iyo Tsunami
Inta badan sidoo kale loo yaqaan Jimce Wanaagsan dhulgariirkii, gempad oo ka dhacay on March 27, 1964 ee Alaska ayaa ku dhintay 131 oo qof. Sagaal qof ka dhulgariirka, 106 oo qof oo tsunami ee Alaska iyo 16 qof oo tsunami ee Oregon iyo California. Dhaawac uu dhulgariirkii iyo tsunami waxaa lagu qiyaasaa in ay gaadhaan US $ 2 bilyan oo dheeraad ah.
9. Samoa Dhulgariirka iyo Tsunami 2009
29kii September 2009, Samoa Islands soo maray dhulgariir lagu qiyaaso 8.1 Miisaanka Richter (SR). Dhulgariir iyo tsunami ayaa galaaftey nolosha ilaa 189 oo qof. Haddaan Center Digniin Pacific Tsunami ma soo saari ma digniin Noqdo dhimasho dheeraad ah oo ku dhintay. Dhacdadani waxa ay calaamadeeyey dhulgariirkii ugu awooda badan ee 2009.
8. Dhul Gariir iyo Hokkaido Tsunami 1993
In kasta oo ay dawladda Japan ayaa degdeg ah in laga jawaabo digniin Tsunami, laakiin jasiirad yar oo Okushiri in Hokkaido ayaa waxaa si xun u burburay intii lagu dhulgariirkii iyo tsunami ka dhacay on July 12, 1993. Dhulgariir ku xiga tsunami ah oo ka dhacay 80 miles ka baxsan xeebaha Hokkaido la weyn 7.8 SR. Wadar ah 230 dad ku dhinteen oo boqolaal qof oo ku dhaawacmay iyo hoy la'aan.
7. Dhul Gariir iyo Tsunamo Tumaco 1979
On December 12, 1979, dhulgariir lagu qiyaaso 7.9 Richter scale ku dhuftay xeebaha dalka Colombia iyo Ecuador. Tsunami ay burburiyeen dhammaan guryaha ee San Juan de la Costa. Wadarta dhimashada ayaa kor u qiyaasay 600 oo qof. Inkasta oo 4,000 oo qof ay ku dhaawacmeen.
6. Java Dhulgariirka iyo Tsunami 2006
7.7 magnitude dhulgariir ku dhuftay jasiiradda of Java on July 17, 2006 dhulgariir ka dhacay on xuduudda saxan-gacmeed, kicin karta tsunami ah. About ah 668 qof ayaa ku dhintay, 65 qof ayaa ka maqan, iyo 9299 daweeyey dhaawacyo.
5. Dhulgariirka iyo Tsunami Moro 1976
Mindanao Island ee Philippines waxaa ku dhacay dhulgariirka uu xajmigiisu 8.0 on August 16, 1979 oo ay ku dhinteen 5000-8000 dadka leh in ka badan 2,200 oo qof ayaa la wariyay in la waayay, 9,500 qof ayaa ku dhaawacmay iyo in ka badan 90,000 oo guri la'aan. Tirada dadkii ku dhintay oo ka dhacay dhulgariir oo tsunami laga yaabaa in haddii dhulgariir ka dhacay habeenkii.
4. Papua New Guinea Dhulgariirka iyo Tsunami 1998
7.0 magnitude dhulgariir ku dhuftay xeebaha waqooyi ee dalka Papua New Guinea on Friday, July 17, 1998 dhulgariir ayaa kiciyay dhul ay hoos u tsunami 49-meter-sare. Wadar ah 2,200 qof ayaa la dilay iyadoo kumanaan la dhaawacay. Dhab ahaantii An xiiso leh, inkasta oo aan aad u weyn oo meeley u keeni kara tsunami ah oo soo baxay si xun.
Sunday, May 22, 1960 waxaa lagu xasuustaa maalintii ugu bahalnimada ah ee dadka reer Chile. Buureedyada iyo dhulgariir sababay tsunami ah oo ay ku dhinteen 6,000 oo qof. Marka ay dhacdo in sicir bararka hadda waxaa sabab u ah burburka faraha dhacdaa.
2. Tohoku Dhulgariirka iyo Tsunami 2011
Japan waxaa ku dhacay dhulgariir 9.0 magnitude awood badan on March 11, 2011 dhulgariir ayaa kiciyay tsunami ah u sarraysaa sida 23 feet. 125,000 oo dheeraad ah dhismaha ee burburay oo ku baabbi'iyeen. Laakiin ugu khatarsan tagay sababo la xiriira musiibooyinka dhulgariir iyo tsunami ahaa dillaac ah nuclear in loo sameeyo meel ka mid ah 200 mayl ee warshad nukliyeer xoog leh shucaaca. Dhulgariir ayaa kor u dilay ilaa 15 839 noloshooda, 5.950 way ku dhaawacmeen, iyo 3,462 oo qof maqan.
1. Dhul Gariir iyo Tsunami 2004
Dhulgariir iyo tsunami in dhuftay xeebaha Badweynta Pacific on December 24, 2004 ahayd masiibooyinka ugu ba'an ee dabiiciga ah iyo ugu burbur ee taariikhda aadanaha. Dhulgariir ka dhacay qoto dheer oo 30 km waxaa keena hirarku tsunami u sarraysaa sida 15 mitir. Tsunami waasac gaaro 5,000 km in Africa. Tsunami waxaa ku dhintay in ka badan 150,000 oo qof oo malaayiin qof oo bilaa guri ee 11 dal. Khasaaraha keena dhulgariirkii iyo tsunami ayaa na soo gaadhay $ 10 trillion, si loo yaqaan Tsunami dhimashada badnaa ee taariikhda.
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين (31) Marka Rasuullo (Malaa'igta) yimid Ibraahim war wanaagsan u keena, oo waxay ku yidhaahdeen: a, Anagu waxaan ka baabbi'in doonaa dadka dalka (Sodom) this; deggan dhabta ah waa kuwa zalim`. (29:31 QS.)
Aayaddan waxa Eebe ku sharxayaa ku saabsan imaanshiyaha malaa'igtii u yimid Nebi Ibraahin siiyey war wanaagsan in Ilaah isaga ka wiil siin doonaa magacaabay Isxaaq. Later, wiilkii waxaa lagu magacaabi doonaa nebigii iyo Rasuul badalay hawlaha iyo xilalka Ibrahim. Markaas ogeysiiyo isaga u Sodom la baabbi'in lahaa inuu ciqaabo dadka Beeniyey Luudh.
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين (32) Wuxuu yidhi: Sida xaqiiqada ah in ay jiraan magaaladaas Luth`. Malaa'igahu way soo ayaa yiri: "Waan ognahay oo ay ku lahayd magaalada. Si daacad ah waxaan isaga iyo kuwa uu badbaadin lahaa iyo ehelkiisa Haweenaydiisa mooyee. Waxa uu ka mid noqdo kuwa Halaagsami (Halaagnay) ahayd. (QS. 29:32)
Ibrahim wuxuu ahaa walwalsan iyo walaaca ka yimi ee ah Luudh, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in Luudh ayaa sidoo kale burburiyey iyaga la. Sidaa darteed wuxuu u xusuusiyay kuwa u wakiishay Ilaah. Hi malaa'ig, waxaa jira Rasuul Ilaah magacaabay Luudh, inuusan ka mid ah kuwa loo silciyo, waxaa isaga ku xigay xitaa uu yahay rasuul rumeeyey xaqa oo ay isaga u addeecaan. Malaa'igtii ayaa ku jawaabay, "Haa Waan memakluminya, iyo Luudh kuma jiraan fasalka Xumaan waxaa ka mid ah. Xaaskiisa oo keliya ka mid ah kuwa sii jirdili doono ahaayeen, maxaa yeelay waxa ay ka caawisay inuu xaq yahay Luudh ku gaalnimo iyo Qoomkiisii kibir iyo sidoo kale shuqulladiisa sharka ah.
ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين (33) إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون (34) markay Malaa'igtaan soo diray (ee Malaa'igtii) ku yidhi Nabi Luudh, wuxuu u calool xumaaday, maxaa yeelay of (imaanshiyaha) iyaga, oo (dareen) ma laha awood ay ku difaacaan oo waxay yidhaahdaan, Ha cabsan, hana noqon (sidoo kale) adag. Indeed, waxaan ka badbaadin doonaa adiga iyo kuwa raacsan aad raacsan, Haweenaydaada mooyee, ayay ka mid tahay kuwa Halaagsami ahaa (Halaagnay). (29:33 QS.)
Sidaas darteed, markii Malaa'igta u timid Nabi Luudh, oo gaadhsiin ujeedada uu yimid, Luudh argagax iyo neef tuur, waayo, wuxuu ahaa mid ka walwalsan tahay dadka Sodom, waxaa isaga dhibaato lahaa ka dib markii ay marti sharaf ogahay in. Sidaa imaanshiyaha malaa'igtii ahaa ula kac ah faqeen. Luudh ma diidi karaan ay yimaadaan.
Angel ka dib markii cabsi iyo walaac badan ay ka imanayaan dad Nabi Luudh, waxa uu ahaa in tentramkan malaa'igahu waxay la salaamayay, "Hi Luudh ha idin deji, hana ka murugoodo". Ma aha in aad walwasho oo ku saabsan ammaanka iyo wixii loogu sameeyey dadka aad noo soo horjeeda. Sababtoo ah xumaanta ayaa gaartay meesha ugu sarreysa iyo talo aad wax ku filan inuu ku yidhaahdo.
Si aad u nabadeeyaan dareenka Luudh, malaa'igtii ayaa sidoo kale sheegay, "Waxaan idinka badbaadin doonaa Cadaabka in loo gudbin doonaa dadka aad mustaqbalka dhow, iyo sidoo kale kuwa raacsan ee waa aamin iyo daacad. Ma jiri karto, waxa ay dhab ahaan u socdaan in ay la kulmaan cadaab daran. Oo naagtii oo ay ku jiraan kuwa kooxaha in la ciqaabi doonaa ". Naagtii Luud ogtahay stop nin (joogo) guriga, ka dibna si deg deg ah uu ku wargeliyay asxaabtiisa in warkiisa ku si deg deg ah ku faafi in ay jirto oo marti ku ahaa in aan la garanayn Luudh guriga. Isla markiiba kacay xumaan Quluubtooda in dhibin martida. Bermufakatlah talo iyo waxay ka sameeyeen qorshe, sida ay u fuliyaan dooneynin in. Sidaas darteed waxaa cad in Haweenaydii Nabi Luudh ay ka mid yihiin kuwa ururka in nidaamka. Aflagaada malaa'ig on top, dabacsan dareen Luudh cabsi. Si aad isaga mar waaniyey, "Waxaan nahay Malaa'igta hubaal ah cadaab iyaga ku soo dayn doonaa annagoo gacmahayaga, sabab ay xumaanta la dhexgeliyaa iyaga oo ku".
Afkaarta Xusuuso odorosay, si lama filaan ugu horeysay adag, dhulka deggan tahay meel ka mid ah rogad nin dembiga. Dalka ayaa waxaa hal mar ay weerar ku dhacay roob dhagaxyaale iyo noqdo dhulgariir weyn ka dusisay noqon radi dhulka. Ugu dambeyntii dadka Sodom Nabiga Luudh hore ee deggan badda Geeri (Al Bahr Mayit).
Sida xaqiiqada ah waxaan hoos u dhigi doontaa ciqaabta samada ka dadka magaalada ku dul maxaa yeelay, iyagu waxay sameeyeen shar ah. (QS. 29:34)
ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون (35) dhab ahaan waxaanu kaga tagnay magaaladaa calaamad u muuqata Qoomkii wax kasi. (QS. 29:35)
Markaas sheegay in ka Cadaab iyo xoojiyo ayaa hoos u sii dheer in ay qalad tahay in la sameeyo ayaa dadka Nabiga Luudh ciqaabta, waxaa sidoo kale la filayaa in ay xusuus u noqoto nool ka ab intaas ka dib. tusaale ahaan dadka isticmaala sabab iyo doonayo casharo ka waxa dhacay.
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين (36) (Nabi) si degan Mad-yan, Walaalkood Nabi Shucayb, wuxuuna ku yidhi: 'Qoomkayow Caabuda Eebe aad by, filan ( Abaal marin) dhamaadka maalintii, oo aadan dhex mushaaxaan dhulka `belaayadii. (QS. 29:36)
Ilaah dadka la deggan dalka reer Madyan, inay Ilaah u caabudaan Ilaaha Qaadirka ah la daacadda (isaga oo aan la wadaajisaan dadka kale) diray Nebi Shucayb. Cibaadada wuxuu noqon doonaa faa'iido u barakaysan ee ku nool dunida oo dhan iyo aakhiraba. "Aayaddan waxa la filayaa", waxaad u Maleyseen inaad Aakhiro ", oo macnaheedu yahay ha oo aad ka baqato by imaanshiyaha maalintaas iyo naftaada guntan camalka wanaagsan intii suurto gal ah si ay u wax ka qaban. Intaa waxaa dheer, Baaqa inay Ilaah u caabudaan Ilaaha Qaadirka ah, oo u tarantaan zakada sahayda aakhiro, Shucayb sidoo kale soo jeediyay in ka tago oo dhan shuqullada ku jirana burbur oo ay baabbi'iyaan.
Ha ma yeeli kasta oo kale oo caynin dadka la shaqayn jiray. Tusaale ahaan hoos u tallaabooyin iyo miisaanka, iyo dhacaan safarkii in markaas ahaa. Markaas perbanyaklah toobadda Ilaah sida uu soo laabtay isaga oo ag jooga si ay wax uqabato amarradiisa iyo fogaado reebay uu.
فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين (37) Wayna Beeniyeen, oo waxay dagaal ku dhufteen dhulgariir xoog badan, oo noqon meydadkoodu waxay ku jiifa meelaha ay ku nool yihiin. (QS. 29:37)
Laakiin sidoo kale dadka Nabiga Luudh, dadka Nebi Shucayb ahaa caasiyiinta iyo dooneynin inay aqbalaan talo ah ee Shucayb Nabiga. Xataa waxay diiday isaga. Sidaa darteed shaqaale ka Sunna Ilaah. Markii ay si cad been Shucayb dib markii si joogta uga digay, ka dibna waxa la joogaa wakhtigii Eebe ha ku cadaabo. Earth inay guryahooda ruxayso Gariirkii in la gariiray dhulka oo burburiyeyna guryo ay. Waxay ku dhintay rogad oo wuxuu liqay by dhulka, oo aan dhaqaaqin mar kale. A sheeko dhamaystiran ee Shucayb Nebi ayaa sidoo kale xusay oo uu Ilaah ka jira marinnada kale, warqad Al A'raf aayadda 88 s / d 93, a Warqad Huud aayadda 87 s / d 94, iyo warqadda Ash Shu'ara 'baaragaraafka 176 s / d 190.
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين (38) (sidoo kale) ee Caad iyo Thamuud, iyo waxa ay cad aad (halaagoodii) in ka burburka guryahooda. Markaasaa Ibliisku wuxuu iyaga ka dhigaa inay eego camalka wanaagsan, Markaas wuxuu iyaga ku reebay wadada (Eebe), halka ay dadka fiiqan-arkay, (QS. 29:38)
Aayaddani waxay tilmaamaysaa ugu Wacan Caasinimadooda Hud Nabiga iyo in uusan rabin in uu ka tago ilaahyadooda jeedaan. Taasi sababay qancinta ah cadaw ah sidoo kale. Waxaa intaa dheer waxay Caabudi oo Eebe ka soo Ilaaha Qaadirka ah ayaa sidoo kale ku faraxsan carqaladeeyo jiido maraayay ay alaabada sidda, haddii ay awood ku filan oo ay kula tahay in la qiimeyn karaa sida xun wixii ay sameeyeen leeyihiin. Waxay inta badan ka walaacsan oo sugaya imaanshiyaha ciqaabta Ilaah u yaboohay, ka dibna, laakiin ay marna ku fakarin cadaab Ilaah u yaboohay, iyagu ha u malayn iyo fiirsanin Cadaab in ay dhici doonta. Inkasta oo ay mashquul ku yihiin inay shaqada ilaa terlengah in ay bixiyaan wax ay muujinaysaa midnimada Ilaah dareenka.
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين (39) iyo (sidoo kale) Qorax, Fircoon iyo Haamaan. Markaasaa waxaa u yimid in ay iyaga Muuse (keenaan caddayn) dhab haybta. Laakiin waxay codsan kibriyeen ah (Ciqaabtii) ee dhulka, oo ay tahay in ay jirin dadka u baxsado, (halligaad). (QS. 29:39)
Muuse ayaa sheegay Karun, Fircoon iyo Haamaan, calaamadaha aayadda Ilaah u aqbalin sida aasaas u ah xoojinta khuseeya la waday. Laakiinse iyagu weli way ku sii is kibriya (isla madax weynaadeen) oo uusan rabin in uu rumaysan. Kibirka Fircoon si dhab ah u ballaadhan, wuxuu u maleeyey in isaga qudhiisu ka mid ah sida Ilaah ah la caabudo. Sidaa oo dhan innaba lama kala saari karaan ciqaab Ilaah ku tortures kala duwan.
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (40) Markaas kasta (waxay ahaayeen) waxaan u qabanay ay sabab u tahay inuu dembigiisa, ka dibna iyaga waxaa ka mid ah Waxaan isaga ku eryaa madaxda quruurux roob iyo iyaga ka mid ah waxaa jira cod weyn ku qayliyey in onkoday overwritten, oo iyaga ka mid ah waxaa jira aan la Hawiyaha dhulka galay, oo iyaga ka mid ah way liqday, Eebana ma inay fidmeeyaan, doonaa laakiin kuwa khasaariyey naftooda silciyaan. (QS. 29:40)
Dadka Ilaah waa la wada baabbi'iyey, waayo, iyagu way diidi jireen Rasuullada, dhaxasheen in ay Kumaan Cadaab, kuwaas oo:
a. Dabaylaha Strong ka kooban dhagaxyada, kaas oo keenay in dadka Nebi Huud (oo `Ad). Waxay loolan Huud, "Cidduu in xoog iyo awood badan na ka badan?". Ilaah abaal ku kibrin la Dabaysha, si ay u ahaadeen. Eebana wuxuu ku jirta aayadda kale oo qeexaya jirdilka, kuwaas oo:
Sida ee `Caadna waxaa lagu halligay Dabayl guuxa si kulul, dabaysha ayaa ka aaneeyay iyaga Toddoba habeen iyo Siddeed Maalmood oo si joogto ah in Ilaah; ka dibna waxaad arki `Caad wakhtigaas ahaadeen sidii iyagoo ahaayeen mooddo jirrid Timir lahaa oo madhan (weathered). Markaas aadan mid iyaga ka mid ah ku noolaa arki (Surah Al Haqqah: 6-8)
b. Codkood iyo onkod in furfuraya dhegta ilmaha jirdil Tani waxaa lagu soo Dejiyey dadka Nabiga Saleh (Thamuud). Waxay weli ma doonayo in aan ku Cassiyaanna aaminka ah. Si kedis ah ay yaabay ka dibna dilay lama filaan ah cod awood leh mar ka onkoday. Eebe mar uu sharaxayaa:
"Sida Thamuud, waxaa lagu halligay dhacdooyin aan caadi ahayn". (Q.S. Al Haqqah: 5)
c. Liqay by dhulka, tani waa jirdil u Karun qani ah. Waxaa uu markii hore ahaa aaminka ah oo addeecay inuu Muuse. Markaas ka dib markii hodan noqon kuwa iskibriya, iyo caasiyiinta. Waxa uu kemungkaran sameeyey ka baxsan. In ka badan in uu uusan rabin in uu sadaqad sida deyn ah oo xoolo talagalay dadka hodanka ah. Sababtoo ah buuxdo waxaa Ilaah ku silcayaa isaga. Ciidda ku wareegsan Karun ku dul ruxmay, dumay iyo si tartiib tartiib ah ilaa liqidda jirka Qorax wadajir tirtiray dhulka permukaann.
d. Maanshaynay biyaha. Tani waa jidh dil bunt tartanka Nuux. Marka laga soo tago Qoomkii Nabi Nuux, Fircoon, Haamaan iyo ciidankiisii tiimbadeen Badda Cas iyo sidoo kale aargoosi u yahay wax aan waxba tarayn iyo jirdil ay sameeyeen Muuse iyo kuwa uu hoggaaminayo. Dhammaan waxaa ka mid ah waa sida rigoore khalad ay sameeyeen, ma aha kibir Eebe SWT. Ilaah marnaba jirdilay qof, laakiin markii uu ka shaqeeyo fal wax dulleeya, sababtoo ah ciqaabo qof aan khalad kasta ma aha sax ah Sunna Ilaah. Halkii ay ku xusan aayaadkiisa iyo jirdil sababta oo ah dembiga, gaalnimo, in Ilaah, sidoo kale sababta oo ah waxay Caabudi Sanamyo iyo inay ka gaaloobeen xaqa Eebe teebaad u siiyey isaga inay.
6 Dadka Ilaah baabbi'iyey Sababtoo ah Gaboodfalkii
Quraanka wuxuu inoo sheegayaa tirada dadka uu Ilaah burburiyey u Jawrfalinc iyo shar dhulka, sida Ilaah Kan diidaya xataa cadowga ku ah Nabiga kaas oo iyaga u soo diray. Halligaadda iyo Dhimashadu waxay noqon aargoosi u kemungkaran iyo sharka ay naftooda u sameeyaan.
"Dadka waxaan u dulmiyin, laakiin waxay dulmiyey naftooda, sababtoo ah waxa ay tiadalah waxtar leh oo dhan, oo ay ilaahyadooda oo waxay Caabudayaan oo Eebe ka soo hadhay, Rabbigiinnu imanayo Cadaab in mar. Oo ilaahyo ma ay iyaga ku sii badin marka laga reebo sheer burburinta "(Surah Huud: 100-101)
Haraadiga burburinta ay weli lagu arki karaa. Cilmi leeyihiin taariikh iyo qaddiimiga helo badan oo magaalooyinka ka maqan. Magaalooyinka waxay leeyihiin sifooyinka sida lagu xusay Quraanka Kariimka ah iyo qoraal gacmeedyada jir ah oo dadka ka wada baabba'ay.
Halligaad ayaa ka mid ahaa qabiilooyinkii Quraanka waxaa Qisadii si aad u faa'iido badan in beelaha in noolaa intii ka dib iyo dulmiyin isku mid ah iyo sinada. Waxaa jira sheekooyin badan oo ka mid ah dadka in Ilaah loo ciqaabo sababtoo ah kemungkarannya.
Nuux wacdiyey for 950 sano, laakiin ajiibay ah ee rumeeya Eebe aad u yar dadka ku wacdiyey. Inta badan dadka uu dhab beeniyay xataa inuu xiiso Nuux. Kemungkaran Dulmi iyo Nuux yeedhi ciqaabta Ilaah. Ilaah ku amartay Nuux iyo dadka taabacsan inay ka dhex samee doonnida (Markabka). Waxay sidoo kale ma oga waxa sanduuqa la sameeyey. Inkasta oo ay dadka uu way wada jajabeen, falalka mencomooh sameeyo sanduuqa Nuux loo arkaa doqon.
Marka wakhtiga la ballamay yimid, Ilaah wuxuu amray in Nuux iyo qoyskiisa iyo xayawaanka ku dhex jira laba laba sanduuqii. Ilaah markaas daadkii ku soo weyn. Guriga oo dhan waa la jebiyey markii ay maanshaynay. Ay ka mid yihiin xaaskiisa iyo wiilkiisa Nuux.
"Dhab Nuux Qoomkiisii soo diray, oo sidaas daraaddeed ayuu iyaga dhexdooda waxaa ku hadhay sano Kun sano oo konton. . Sidaas daraaddeed waxay ku dhuftay daad weyn, oo waxay yihiin kuwa dulmi falay "(Surah Al-Ankabut: 14)
Nuux dadka Ruuxii Adeeca ka badbaaday wixii ka dambeeya waxaa shiraaq isticmaalaya sanduuqii alwaax. Ka dib markii dhoofnay muddo dheer, sanduuqa Nuux waxaa la sheegay heysta ee dhulweynaha sarre wakhtigaas.
"Waxaana ku furay Albaabbada Samada leh (hoos) ee burqan biyaha. Waxaana ka yeellay Dhulka shanqarta ah ilo guga-biyaha, kulan-biyaha ahayd mid amarkooda dhab loo aasaasay. . Waxaana u kaxeeyeen sare (uu ku waantoomo) ka samaysan looxaan iyo ciddiyaha "(Surat Al-Qamar: 11-13)
In taariikhda waxaa ku xusan, daadkii in maanshaynay dadka Nabiga Nuux markii daboolka sidoo kale waa saddex-meelood laba ka mid ah dhulka ku dhow. Nuux oo ay la socdaan kuwa raacsan aamin ah kii ka badbaaday fasax cadaab Alle. Laakiin ilaa iyo hadda, ma aha qaar halkaas meesha uu maraakiibta halkaa ku soo dayn Nuux iyo kuwa uu hoggaaminayo.
dhismaha Nebi Huud
2.Kaum Hud sida
Hud loo diray Caad. Waxay beeniyeen Nabinimo ee Nebi Huud. Hud ugu baaqay dadka uu si dhac Eebe iyo ka tago caasinnimada qaadeen. Si kastaba ha ahaatee, soo wac oo martiqaad oo dhan Hud barwaaqo ah Jees jees, la quudhsado oo lagu diido Ad dadka.
Caad loo yaqaan quruun caaqil oo uu leeyahay technology ay u dhisaan dhismooyinka waaweyn. Laakiin isku halaynta iyo weynaanta iyaga ka dhigaa inay is kibriya, ciidanka bilaa naxariis, iyo kuwa xaqa daran, iyo diidi yeedho dacaayad ku korinnay Huud sida.
Sidaas darteed been-been ah kaasoo samayn Ad ummada ', ayaa shaaca ka qaaday Eebe azabnya aad u poignant. Quraanka waxa uu sharaxayaa aad u cad loolan this.
"Sida Caad, waxaa lagu halligay Dabayl daran oo qabow si kulul, dabaysha Ilaah iyaga hayso Toddoba habeen iyo Siddeed Maalmood oo si joogto ah; ka dibna waxaad arki Caad wakhtigaas ahaadeen sidii iyagoo ahaayeen mooddo jirrid Timir lahaa oo madhan (weathered). . Markaas aadan arkin cid kasta oo iyaga dhex socdayba "(Surat Al Haaqqah, 69: 6-8)
Arkaynin Guryohoodii mooyee Evidence cilmi Ad ilbaxnimada helay West ee 1990 aag loo yaqaano 'Ubar, ee gobolka ee Yemen. Waxa xiiso leh, waxa ay dhab ahaan u heshay sidii u sheegay in Quraanka.
Dr. Zarins, oo xubin ka ah kooxda cilmi baarista keentay kabxidda yidhi, maxaa yeelay munaaradaha gudbiyo sida nooc ka mid ah caadiga ah 'Ubar, iyo tan iyo Ciiraam yaqaan isagoo munaaradaha ama ay daqal, markaa taa waa caddaynta ugu adag ilaa iyo haatan in goobta ay dhiraandhiriyeen ahaa Ciiraam, magaalada reer Caad Quraanka lagu sheegay:
"Ka warran sida Eebahaa ku sameeyey Caad, dadka (tusaale ahaan) Ciiraam in uu leeyahay dhismayaal sare oo aan waligood laga dhisay (magaalo) oo kale, dalalka kale." (Surah Al-Fajr, 89: 6-8)
dhismaha Nebi taqi ah
3.Kaum Nabi Saalax sida
Nabi Saleh Ilaah diutuskan thamuud. Hawlgalka Nabiga Saleh sida la mid ah sida nebiyada kale, kuwaas oo ugu baaqay dadka in ay Tawxiidku (u dhac Eebe). Laakiin wac Nabiga Saleh sida dhab helay tartan iyo jees jeesi jireen dadka uu, quruun Thamuud ah. Dhab ahaantii, inay weli ilaaliyaan cibaadada sanamka la rumeysan yahay in ay isirka u caabudo.
Thamuud sidoo kale loo yaqaan quruun caaqil. Haddii Caad awoodaan in ay dhistaan dhismayaal dhaadheer, kiis kale oo la quruun Thamuud. Waxay awood u bedelno qarar iyo dhagaxyada weyn daarahayaga heer sare ah oo qurux badan. Waxay awoodeen inay la sculpt dhagaxyada oo dhan si ay u noqoto meel ay joogaan. Mar kale, weynaanta iyaga iska leh, iyaga jabay iyo Dulmiyaha Ilaah.
Dadkani waxay ku nool bannaanka loo yaqaan "Al Hijr" yaala inta u dhaxaysa Xijaas iyo RC waxaa hore ku jira qabsado oo xukumi jiray qabiil Caad oo dhintayna, way halligmeen sabab u dhacay duufaanka aargudasho ah u dheceen xadgudubka iyo diidmada ah dacaayadda Ilaah laga soo diray iyo treatises Hud.
Geel A dumarka ah kuwaas oo ka soo Baxday dhagax daloolka sida mucjiso Nabiga Saleh sida uusan ku filnayn si loogu qanciyo rumeeya Eebe. Thamudic dhab dilo geel ah.
Nabi Saalax ayaa sheegay in dad uu sheegay in ciqaabta Ilaah ku dhici korkooda saaran in uu ka muuqadaa doonaa calaamooyin, sida maalinteedii kowaad markay toos, wejiyadooduna waxay u doorsoon iyo casaan noqon doonaa madow maalintii labaad oo maalinta saddexaad iyo maalinta afaraad ayaa ku dhacay Cadaab daran Ilaah.
Maqalka hanjabaad Cadaab in la sameeyo Nabi Saalax, qoyskiisa xitaa qorsheeyey dilka ka hor cadaab tuuray. Waxay shir qarsoodi ah oo wada wacad ku samayn doonaa goob dilkii habeenkii, dadka marka ay weli hurdada jabiyey. Waxay design lagu hayaa si qarsoodi ah si aan la yaqaan oo maqlay qof.
Markay yimaadeen meeshii Nabi Saalax ee habeen-madow gelita iyo aamusnaanta-aamusnaan madaxooda ka badan ku dhacay dhagaxyada waaweyn in samada ka yimid iyo in hal mar ay dhulka yaalay xaalad nolol la'aan. Oo Ilaah ayaa la ilaaliyo Rasuulladiisa dadka ka xun gaaloobay.
Maalin maalmaha ka mid ka hor hoos u dhaca cadaab in la go'aamiyey in, idamka Eebe Nabi Saleh ka baxay oo taabacsan dhinaca Ramallah, meel ku taalla Falastiin, ka tago Hijr. Thamudic lumi Hillaac awood badan ku dhuftay in lala dhulgariir aad looga cabsado.
Waxaa la Qisadii Qur'aanka ee aayadda ah.
". Dhab ahaan dadka deggan magaalada ka mid ah Hijr beeniyey rasuulladii" (Surat Al-Hijr: 80)
"Iyo (Nabi) Ree Thammuud Walaalkood Saalax. Waxa uu sheegay. "Qoomkayow Caabuda Eebe idiinma sugna Ilaah Eebe ka sokow. Hadda waxaa idiinka yimid Xujo cad xagga Eebihiin. . Geela Eebe waa calaamo idiin ahaan, ka dibna ha ka soo cuno Dhulka Eebe, hana dhibin isaga, qaba kasta, (oon) oo aad u iman doonaan inay Cadaab Daran "(Surat Al-Araf: 73)
"Xusuusta inaad waqti Rabbiga aad yeelay kuwo u hadha (xoog) ka dib markii Caad iyo siiyaan meel idiin dhulka. Waxaad dhiso daaraheeda waaweyn ee-dalka ku dhulkaasu waa guri iyo aad qoraysaan buuraha inaad guriga; . markaas aad xusuusataan Nicmada Eebe mana sameeyaan baahsan ee dhulka, fasaad "(Surat Al-Araf: 74)
"Taliyayaasha oo Qoomkiisa ka mid faanin ayaa sheegay in kuwa loo xisaabay inay daciif rumeeyey iyaga oo ku:" ma og tahay in Saleh ayaa waxaa u Dirray (Rasuul) Eebihiis by "?. Waxay ku jawaabay: "Waxaan aaminsan nahay in la muujiyo, oo Saleh ayaa loo diray in ay iyada soo gelin". (Surat Al-Araf: 75)
"Dadka faan leh:" Waxaan nahay dad ah oo aan rumaysan in waxa aad aaminsan tahay waxa ku jira ". (Surat Al-Araf: 76)
"Markaas Waxayna Dileen Hashii, oo kibir bay ku dalban amarka Rabbiga. Oo waxay ku yidhaahdeen: "dheheen Saalaxow noo keen waxaad u ancamkan noo, haddii (haa) waxaad ka mid tahay kuwa la diray (Eebe)". (Surat Al-Araf: 77)
". Maxaa yeelay qabtay Gariirkii, ka dibna waxaa suurtowda inay ku dhintay-dhintay ayaa la jiifa meeshoodii" (Surat Al-Araf: 78)
"Sidaas Saalax tegey iyagii, isagoo leh:" Qoomkayow Bari baan u dhiibay si loo igmaday ee Rabbiga, oo waxaan siiyey talooyin aad si, laakiin ma jeclaan dadka siiyo talo "!. (Surat Al-Araf: 79).
4.Kaum Nabiga Nabi Luudh
Dadka caanka ah xumaan Nabiga Luudh, in kaliya doonayaan in ay guursadaan lammaaneyaasha isku jinsiga ah (gay iyo lesbian). In kasta oo ay hore u siin digniin, aysan rabin in ay toobad keenaan. Ilaah ugu dambeyntii siiyey cadaabka iyaga oo ah qaab dhacay dhulgariir weyn, dabaylo xoog badan iyo roobdhagaxyaale in dumay guryahoodii. Markaasay dadkii Nabiga Luudh ugu dambeyntii waxaa lagu aasay hoos burburka guryaha iyaga u gaar ah.
"Fankay ayaa beeniyey rasuulladii uu, marka Walaalkood Luudh, wuxuu iyagii ku yidhi" Maxaad tiidak taxadar? ". Dhab ahaantii waxaan ahaa rasuul aamin ah (taas oo loo soo diray) inaad, ka dhawrsada Eebe ina adeeca. Oo anigu weydiisan kartaa ma mushaharka, waayo, ujuuradayda waxaa ka Rabbiga ciidammadu kaliya. Maxaad u yimid inuu nin nooc oo dadka dhexdooda, oo aad ka tagto xaasaska Eebihiin oo aad sameeyey, xataa waxaad tahay kuwa Xad gudbee. Waxay ku jawaabay "O Luudh, dhab ahaantii haddii aadan joojin, run ahaantii waxaad ka mid tahay kuwa soo hijrooday". Luudh wuxuu yiri: "Waxaan aad u nici Camal." (Surat Ash-Shu'ara 160-168).
"Sidaas waxaa lagu halligay sanqadh cod dheer onkodka, markii qorraxdu soo sara kici doonaa. Sidaas awgeed, waxaan ka dhigay qayb ka mid ah magaalada hoostoodii waxaana ku soo daadinnay dhagaxyo ah baaruud adag. Runtii, taasna calaamad (Weynaha Us) loogu talo galay dadka bixiso calaamadaha dareenka. Wuxuuna ku suganyahay magaalada ay aheyd mid run ku yaalla jidadka in wali (aadanuhu maray). "(Surah Al-Hijr 73-76)
5.Kaum Nebi Shucayb sida
Nebi Shucayb diutuskan Madyanna ah. Madyan ayaa waxaa uu Ilaah burburiyey, waayo, waxay jecel yihiin musuqmaasuq iyo khiyaamo ganacsiga. Marka aad iibsanayso, waxay weyddiisteen dhaafo iyo markii inay iska iibiso waxaa had iyo jeer la yareeyo. Ilaah ayaa sidoo kale ku ciqaabo qaab kulayl xad-dhaaf ah. In kasta oo ay magan meel hadh ah, ma aysan awoodin in ay sii daayaan kulaylka. Ugu dambeyntii, Oo waxay ku halligmeen.
"Miyaan u yimid in ay news muhiim ah oo ku saabsan dadkii la jiray iyagii ku hor, (oo ah) Qoomkii Nabi Nuux, Caad, Thamuud, ee Ibrahim, oo deegaan ahaan ka Madyan iyo dalalka in ay burbureen? . Yimid in Rasuullo ula war qoraal ah oo dhab ah, markaas Eebana waa dulmiyin ma, laakiin kuwa iyaga ku eryan "(QS Attaubah: 70)
"(Waxaa) markii walaalkiis dumar socod ah, oo wuxuu ku yidhi (qoyska Fircoon):" Waxaa laga yaabaa waxaan qofka u gar qaadi doono idin tusin "Haddaba, waxaan aad ku noqoto hooyo, qalbigiisa iyo calool u faraxsan?. Ma kartaan inaad sintaan dilay nin, markaas waxaan idinka soo samatabbixiyey dhibaato oo ay leeyihiin waxaan idinku Imtixaami qaar ka mid ah oo ahaa jirrabyadii; . kadibna aad ku nooleyd dhowr sano ka mid ah dadka degan Madyan, markaas waxaad u timid markii set Muusow "(QS Thaaha: 40)
". Markaasay dadka reer Madyan, iyo waxa uu beeniyey Muuse, ka dibna waxaan ku ganaax (caddibaadda Eebe) Gaalada, ka dibna waan Qabtay, ka dibna (eeg) sida weyn oo aan nacayb (iyaga)" (Surat Caashi: 44 )
Intaa waxaa dheer in Madyan ah, Nebi Shucayb sidoo kale soo diray dadka degan Shucayb. Waxay caabudi goosin ka mid ah dhul lamadegaan in geedaha ay yihiin kuwo aad is dulfuulan. Dadkani, sida ay ku tilmaameen qaar ka mid ah sidoo kale loo yaqaan ku cibaadaystaan kaynta cufan (Nabi Shucayb)
"Waana u Shucayb degan runtii Daalimiinta." (QS AlHijr: 78). Dadka Shucayb Tani waa Shucayb ah. Shucayb waa meel kayn ah ee Madyan.
"Iyo Reer Thamuud, dadka Luudh iyo dadka kayn. Waxay yihiin kooxaha in xulufada (ka dhanka ah rasuulladii) "(Surah Sad: 13).
". Markaasay ku nool iyo sidoo kale Tubax Nabi Shucayb, 'ayaa rasuullada oo dhan la beeninayn horay semestinyalah ay heshay rigoore ah oo uu soo hanjabay" (Surah Qaf: 14)
Inta badan reer binu Israa'iil waa la dulmay by Fircoon. Ilaah wuxuu soo diray Muuse iyo Haaruun, si uu ugu digo Fircoon caddaalad darada lagu sameeyey. Muuse iyo Haaruun, oo Fircoon ugu baaqay kuwa aaminka ah Eebe iyo cadaalad dadka. Laakiin Yeedhe u qubeysan Nabiga Musa maray dabaysha. Xitaa Fircoon la kibirka iska caabin Muuse baaqyo iyo qirtay sidii ilaah oo kale.
Currently maalin ditentukam soo gaaray, Alle amray Nebi Muuse iyo Qoomkiisa Masar ka soo baxay oo ay soo gudbeyn badda cas. Mucjiso ah in Ilaah siiyey foomka xaabo in badda ku kala qaybisay karaa hab Muuse iyo Qoomkiisa inay soo baxaan oo ay u haajiraan. Muuse iyo Qoomkiisa Masar ka soo baxay oo habeenkii si looga fogaado halis ku Fircoon. Laakiin bixitaanka Muuse iyo Qoomkiisa ayaa loo yaqaano Fircoon. Fircoon ka dibna la kumanaan ciidamo ku raad Muuse.
Muuse iyo Qoomkiisa Badda iyada oo loo marayo waddo ah oo uu soo sameeyay. Marka Muuse iyo Qoomkiisa ayaa guud ahaan yimaado, fircoon iyo ciidammadiisa ayuu gaaray bartamihii hab-. Kolkiiba badda Split isla markiiba mar kale ku xidhay. Fircoon iyo ciidankiisii Maanshaynay Badda Cas.
Ilaah waa weyn yahay, oo jidhka ka mid ah oo gaadhifaras Fircoon hayo iyo maarayn soo saaray ka dib markii kumanaan sano lagu aasay Qookaaga Mugdiyada xagga badaha. Ilaa iyo hadda jirka oo Fircoon weli waxaa laga arki karaa in mumiyayaasha museum in Masar ay.
"(Xusuuso) markaan ku nidhi belahkan badda idiin, oon idin korinay oona maanshaynay fircoon iyo marka aad isu aragtid laftaada." (Al Baqarah: 50)
"Sidaas on maanta waxaan jirkaaga ku badbaadi si aad noqon kartaa waano isagoo u ah kuwa ka soo sesudahmu oo dhab ugu aadanaha oo ka warqabin ka mid ah calaamadaha Us ah." (Yunus: 92)
"Markaasaa Fircoon wuxuu ku yidhi kuwii Gaararkiisa ahaa; "Qoomkayow-sharaf, ma aqaan ilaah kuu aniga mooyaane." (Surat Al-Qasas: 38).